3. Listen First (ကိုယ်ကစပြီး နားထောင်ခြင်း။) – Limits X
Complete Leadership 3. Listen First (ကိုယ်ကစပြီး နားထောင်ခြင်း။)
အခုအချိန်က VUCA အချိန်ပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်ထဲအကုန်မသိနိုင်ပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် ဒီအချက်ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ နားထောင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟာ အမှားနည်းတယ်၊ လူချစ်လူခင်ပေါတယ်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို စဉ်းစားနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ နားထောင်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Listening နဲ့ Hearing ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို ကျွန်တော်တို့ အရင်နားလည်ရပါမယ်။ Hearing ဆိုတာက သူ့အလိုလိုဖြစ်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ Listening ဆိုတာက အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေသလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ရတာပါ။ ဥပမာ စာဖတ်တာမျိုးပါ။
Listening ကို ၄ မျိုး အသေးစိတ်ခွဲလိုက်လို့ရပါတယ်။
Listen With : ဘာတွေနဲ့ နားထောင်တာလဲ။
Ears👂, Eyes👀, Heart❤️, Mind 💭 & Focus 🎯
Listen By : ဘယ်လိုနားထောင် ရမှာလဲ။
အနှောက်အယှက်တွေကို ဘေးဖယ်ပြီးနားထောင်ရပါတယ်။ ( Removing Distractions) လက်ရှိအချိန်မှာ အကြီးမားဆုံးအနှောက်အယှက်ဖြစ်လာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေပါ။ ဒါကြောင့် ဖုန်းတွေကို ဘေးဖယ်ပြီးနားထောင်ပါ။
Listen To : ဘာတွေကိုနားထောင်တာလဲ။
3Vs ကို နားထောင်ရတာပါ။
Verbal : စကားလုံး အသုံးအနူန်းတွေ။ စကားလုံးကြွယ်ဝသူတွေပြောတာနားထောင်လို့ကောင်းမှန်း အားလုံးသိပါတယ်။ စကားပုံလေးတွေ ကဗျာလေးတွေ နဲ့ စကားလုံးလှလှလေးတွေသုံးတတ်သူရဲ့ စကားကနားထောင်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။
Vocal : အသံနေ အသံထားတွေ။ အသံနေအသံထားလို့ပြောတဲ့အခါ Speed - စကားပြောတဲ့နူန်း၊ Volume - အသံကြယ်လောင်မှု၊ Pitch - အသံရဲ့စူးရှမှု ဆိုပြီး ၃ ခုထပ်ခွဲလို့ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ Video ထဲမှာ ရှင်းပြထားပြီးသားပါ။
Visual : ကိုယ်ဟန်အမူအရာတွေ။ Body Language က Communication အတွက်အရေးအကြီးဆုံးပါ။
Verbal - 7%
Vocal - 38%
ဆိုပြီး သုတေသနတွေကလည်း ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့က ဘယ် V ပေါ်က အချက်အလက်ကို အဓိကထားလဲဆိုရင် Visual ပါ။ ဒါ့ကြောင့် နားထောင်တဲ့အခါမှာ မျက်စိရဲ့အရေးပါမှုကကြီးမားပါတယ်။
Listen For : ဘာတွေကိုသိဖို့ နားထောင်တာလဲ။
အများစုက နားထောင်မှု လွဲမှားနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အများစုက အကြောင်းအရာ အချက်အလက်ကိုပဲ နားထောင်တာများကြတယ်။
တကယ်တန်းအရေးအကြီးဆုံး နားထောင်မှုက ခံစားချက်တွေနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို နားထောင်ပေးခြင်းပါ။
စကားလုံးတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ခံစားချက်တွေ အတွေးအခေါ်တွေ ရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စကားပြောဆိုတဲ့ အချိန်မှာသိစေချင်တာက သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုပါ။ ဒါတွေကို နားထောင်နိုင်တဲ့ သူဟာသူများအပေါ် နားလည်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုအများကြီးရှိလာပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအချက်ပါ။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ရဲ့ Challenge က မိတ်ဆွေတို့ သူများနဲ့ စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကပြောတာကိုလျော့ပြီး ပိုနားထောင်ပေးပါ။ သူများပြောတာကို နားထောင်တဲ့အခါမှာလည်း သူတို့စကားလုံးနောက်က ခံစားချက်နဲ့ အတွေးအခေါ်ကိုကြားအောင် နားထောင်ကြည့်ပါ။
ဒီလို Feelings နဲ့ Thoughts ကိုနားထောင်နိုင်တဲ့ သူဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးအရည်အချင်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သွားမှာပါ။